Imininingwane enemininingwane ngephutha le-CHECKDB "Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM"
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen SQL Recovery Iphutha le-CHECKDB: Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) likhonjwe yi-Pointer elandelayo yekhasi le-IAM
Imininingwane eningiliziwe mayelana nephutha le-CheckDB "Ikhasi Le-Index Allocation Map (IAM) likhonjwe yi-Next Pointer Yekhasi Le-IAM"
Msg 8921, Izinga 16, State 1, Line 8
Ukuhlola kunqanyuliwe. Kutholwe ukwehluleka ngenkathi kuqoqwa amaqiniso. Mhlawumbe ukuphuma kwesikhala esikhaleni noma itafula lohlelo akuhambelani. Hlola amaphutha wangaphambilini.
Msg 8998, Izinga 16, State 2, Line 8
Amaphutha wamakhasi kumakhasi e-GAM, SGAM, noma e-PFS avimbela ukubhekwa kobuqotho besabelo kumakhasi e-ID angama-database angu-39 kusuka ku- (1: 0) kuye ku- (1: 8087). Bona amanye amaphutha ngenxa yesizathu.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo esingu-1 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 angahlotshaniswa nanoma iyiphi into eyodwa.
Msg 2575, Izinga 16, State 1, Line 8
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 157) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 3, index ID 1, partition ID 196608, alloc unit ID 196608 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ayikwazanga ukulungisa leli phutha.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo esingu-1 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysrscols' (into ID 3).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 131) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 5, index ID 1, partition ID 327680, alloc unit ID 327680 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo esingu-1 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysrowsets' (into ID 5).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 21) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 7, index ID 1, partition ID 458752, alloc unit ID 458752 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ukulungisa leli phutha kudinga ukuthi amanye amaphutha alungiswe kuqala.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 18) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 7, index ID 2, partition ID 562949953880064, alloc unit ID 562949953880064 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wokuwabiwa ama-2 namaphutha wokuvumelana okungu-0 kuthebula 'sys.sysallocunits' (into ID 7).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 12) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 8, index ID 0, partition ID 524288, alloc unit ID 524288 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo esingu-1 namaphutha wokuvumelana okungu-0 kuthebula 'sys.sysfiles1' (into ID 8).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 137) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 20, index ID 1, partition ID 281474978021376, alloc unit ID 281474978021376 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo esingu-1 namaphutha wokuvumelana okungu-0 kuthebula 'sys.sysdbfiles '(into engu-20).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 152) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 23, index ID 1, partition ID 281474978217984, alloc unit ID 281474978217984 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo esi-1 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysphfg' (into ID 23).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 154) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 24, index ID 1, partition ID 281474978283520, alloc unit ID 281474978283520 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo esingu-1 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysprufiles' (into ID 24).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 92) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 27, index ID 1, partition ID 281474978480128, alloc unit ID 281474978480128 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 288) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 27, index ID 2, partition ID 562949955190784, alloc unit ID 562949955190784 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 96) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 27, index ID 3, partition ID 844424931901440, alloc unit ID 844424931901440 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-3 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysowners' (into ID 27).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 102) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 29, index ID 1, partition ID 281474978611200, alloc unit ID 281474978611200 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo esi-1 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysprivs' (into ID 29).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 117) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 34, index ID 1, partition ID 281474978938880, alloc unit ID 281474978938880 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 295) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 34, index ID 2, partition ID 562949955649536, alloc unit ID 562949955649536 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 368) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 34, index ID 3, partition ID 844424932360192, alloc unit ID 844424932360192 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 123) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 34, index ID 4, partition ID 1125899909070848, alloc unit ID 1125899909070848 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-4 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysschobjs' (into ID 34).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 108) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 41, index ID 1, partition ID 281474979397632, alloc unit ID 281474979397632 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 245) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 41, index ID 2, partition ID 562949956108288, alloc unit ID 562949956108288 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.syscolpars' (into ID 41).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 10) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 44, index ID 1, partition ID 281474979594240, alloc unit ID 281474979594240 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 286) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 44, index ID 2, partition ID 562949956304896, alloc unit ID 562949956304896 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysnsobjs' (into ID 44).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 76) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 50, index ID 1, partition ID 281474979987456, alloc unit ID 281474979987456 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 292) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 50, index ID 2, partition ID 562949956698112, alloc unit ID 562949956698112 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 294) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 50, index ID 3, partition ID 844424933408768, alloc unit ID 844424933408768 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-3 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysscalartypes' (into ID 50).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 125) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 54, index ID 1, partition ID 281474980249600, alloc unit ID 281474980249600 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 284) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 54, index ID 2, partition ID 562949956960256, alloc unit ID 562949956960256 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysidxstats' (into ID 54).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 141) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 55, index ID 1, partition ID 281474980315136, alloc unit ID 281474980315136 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 55) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 55, index ID 2, partition ID 562949957025792, alloc unit ID 562949957025792 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wokuwabiwa ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysiscols' (into ID 55).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 13) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 58, index ID 1, partition ID 281474980511744, alloc unit ID 72057594037993472 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 84) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 58, index ID 2, partition ID 562949957222400, alloc unit ID 72057594038059008 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysbinobjs' (into ID 58).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 129) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 60, index ID 1, partition ID 281474980642816, alloc unit ID 281474980642816 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1:45) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) ku-ID yento 60, i-index ID 1, ukwahlukanisa i-ID 281474980642816, i-unit unit ID 71776119065149440 (thayipha idatha ye-LOB) , kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysobjvalues' (into ID 60).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 88) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 64, index ID 1, partition ID 281474980904960, alloc unit ID 281474980904960 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 243) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 64, index ID 2, partition ID 562949957615616, alloc unit ID 562949957615616 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysclsobjs' (into ID 64).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 15) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 69, index ID 1, partition ID 281474981232640, alloc unit ID 72057594039697408 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 39) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 69, index ID 2, partition ID 562949957943296, alloc unit ID 72057594039762944 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 290) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 69, index ID 3, partition ID 844424934653952, alloc unit ID 72057594039828480 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wokwabiwa ama-3 namaphutha wokuvumelana okungu-0 kuthebula 'sys.sysrts' (into ID 69).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 98) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 74, index ID 1, partition ID 281474981560320, alloc unit ID 281474981560320 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 100) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 74, index ID 2, partition ID 562949958270976, alloc unit ID 562949958270976 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wokuwabiwa ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.syssleleobjrefs' (into ID 74).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 104) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 75, index ID 1, partition ID 281474981625856, alloc unit ID 281474981625856 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 106) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 75, index ID 2, partition ID 562949958336512, alloc unit ID 562949958336512 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysmultiobjrefs' (into ID 75).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 33) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 90, index ID 1, partition ID 281474982608896, alloc unit ID 72057594038583296 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 81) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 90, index ID 2, partition ID 562949959319552, alloc unit ID 72057594038648832 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysqnames' (into ID 90).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 49) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 91, index ID 1, partition ID 281474982674432, alloc unit ID 72057594038779904 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 35) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 91, index ID 2, partition ID 562949959385088, alloc unit ID 72057594038845440 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wokuwabiwa ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysxmlcomponent' (into ID 91).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 83) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 92, index ID 1, partition ID 281474982739968, alloc unit ID 72057594038976512 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo esingu-1 namaphutha wokuvumelana okungu-0 kuthebula 'sys.sysxmlfacet' (into ID 92).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 130) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 93, index ID 1, partition ID 281474982805504, alloc unit ID 72057594039107584 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 22) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 93, index ID 2, partition ID 562949959516160, alloc unit ID 72057594039173120 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysxmlplacement' (into ID 93).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 114) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 97, index ID 1, partition ID 281474983067648, alloc unit ID 72057594038190080 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 134) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 97, index ID 2, partition ID 562949959778304, alloc unit ID 72057594038255616 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wesabelo ama-2 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'sys.sysbinsubobjs' (into ID 97).
Iphutha lethebula: i-ID yento 99, i-index ID 0, ukwahlukanisa ID 0, i-unit unit ID 6488064 (uhlobo lwedatha yokwabiwa kwesistimu), ikhasi (57311: 268369920) Ukuhlolwa (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) kwehlulekile. Amanani angama-2057 no -4.
I-CHECKDB ithole amaphutha ama-5 okwabiwa namaphutha angama-28 kuthebula '(Object ID 99)' (object ID 99).
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 120) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 245575913, index ID 0, partition ID 72057594040549376, alloc unit ID 72057594045792256 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1:118) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) ku-ID yento 245575913, i-index ID 0, ukwahlukanisa i-ID 72057594040549376, i-unit unit ID 72057594045857792 (thayipha idatha ye-LOB) , kepha ayitholakalanga kuskena.
Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) (1: 126) likhonjwe yisikhombi esilandelayo sekhasi le-IAM (0: 0) entweni ID 245575913, index ID 2, partition ID 72057594040614912, alloc unit ID 72057594045923328 (type In-row data), kepha ayitholakalanga kuskena.
I-CHECKDB ithole amaphutha wokwabiwa ama-3 namaphutha wokungaguquguquki angu-0 kuthebula 'TestTable' (into ID 245575913).
I-CHECKDB ithole amaphutha wokwabiwa angama-58 namaphutha okungaguquguquki angama-28 ku-database 'xxxx'.
lapho 'i-xxxx' igama ledatha ekhohlakele ye-MDF elungiswa.
Leli iphutha lokwabiwa njengoba kunezinkinga ngamakhasi we-IAM, ahambelana nawo Msg 2575 iphutha.
Imininingwane esefayilini le-MDF igcinwa njengamakhasi, ikhasi ngalinye lingu-8KB. Ikhasi le-Index Allocation Map (IAM) lisetshenziselwa ukwaba amakhasi efayeleni le-MDF, futhi axhumene nohlu.
Uma umyalo we-DBCC CHECKDB uthola ukuthi uhlu oluxhunyiwe lwamakhasi we-IAM aluvumelekile futhi alikwazi ukulungisa inkinga, khona-ke izobika leli phutha.
Sampula amafayela we-MDF akhohlakele azobangela Iphutha le-Msg 2575:
SQL Server 2014 Iphutha2.mdf Iphutha2_fixed.mdf